Mufaro Unobva Pakupa Vamwe Zvipo: Chinoita Kuti Vamwe Vapemberere Krisimasi
Sezvakataurwa naJesu, kupa kunoita kuti anopa wacho neanopiwa vose vafare. Vakawanda vanoda kufara saizvozvo saka vanofunga kuti kupanana zvipo ndechimwe chezvinhu zvinokosha chaizvo paKrisimasi. Somuenzaniso, gore rapera zvoupfumi pazvakanga zvakaoma chaizvo, imwe ongororo yakaitwa kuIreland yakaratidza kuti mhuri yoga yoga yaitarisira kushandisa mari inenge US$660 pakutenga zvipo zveKrisimasi.
Vakawanda vanofunga kuti kupanana zvipo paKrisimasi kunotoita kuti munhu anetseke pane kuti afare. Sei zvakadaro? Vakawanda vanoguma vava kuda kutenga zvipo zvavasingakwanisi. Vazhinji vanopedzisira vava kufinhwa nokutenga sezvo vakawanda vachienda kunotenga zvipo panguva iyi, zvoita kuti pave nemitsetse yakareba yevanoda kutenga.
Jesu akati: “Garai muchipa.” * (Ruka 6:38) Haana kuti panofanira kungova nenguva imwe chete pagore yokupanana zvipo. Asi akakurudzira vateveri vake kuti vagare vachipa zvipo chero panguva yavanenge vangoda muupenyu hwavo.
“Mumwe nomumwe ngaaite sezvaakasarudza kuita mumwoyo make, asinganyunyuti kana achigombedzerwa, nokuti Mwari anoda munhu anopa achifara.” (2 VaKorinde 9:7) Rimwe bhuku rinotsanangura Bhaibheri rinoti zano raPauro pano rinoreva kuti “hapana anofanira kupa ‘achigombedzerwa,’ kana kuti achinzwa kuti anomanikidzwa kuti adaro.” “Munhu anopa achifara” haanzwi achimanikidzwa kupa mumwe munhu chipo panguva yakanyatsosarudzwa sezvinowanzoitwa paKrisimasi.
“Kana mwoyo unoda uripo pakutanga, zvinogamuchirika kwazvo maererano nezvine munhu, kwete maererano nezvisina munhu.” (2 VaKorinde 8:12) Mwari haadi kuti vaKristu vapedzisire vava nechikwereti vachida kutenga zvipo zvinodhura. Asi kana munhu akapa ‘maererano nezvaanazvo,’ zvipo zvake hazvingonzi zvakanaka chete asi zvinotonzi “zvinogamuchirika kwazvo” kuna Mwari. Pfungwa iyi inozorodza chaizvo nokuti yakasiyana nezvinotaurwa nevanotengesa panguva yemazororo zvokuti unogona hako kutenga nechikwereti wozobhadhara.
^ ndima 8 Mamwe maBhaibheri anongoti: “Ipai.” Asi mumutauro wechiGiriki wepakutanga, shoko racho rechiito rinoreva chinhu chinogara chichiitwa. Kuti ibudise zvizere pfungwa yeshoko rakashandiswa naJesu, Shanduro yeNyika Itsva inoshandura mashoko acho ichiti “garai muchipa.”
Rudo Nemufaro Panguva yeKrisimasi​—⁠Mufaro Unobva Pakupa Vamwe Zvipo